Ababoneleli ngebhola yebhola kunye neFektri - China abenzi bollard abenzi
I-Aluminium Light Aluminium Lightlight CE ROHS IP65 1 ...
Umzi mveliso ngokuthe ngqo 24h Phendula isitrato seKrisimesi sokuhombisa ...
Ukukhanya kweNdlela yokuKhanya kweNdlela yeSitalato ...
Inkqubo ye-AC 85-265V yeSola eKhokelwayo ye-Housing Street ...
Ukukhanya kwesitalato i-200 Watt
Ukulahla iAluminiyam yeglasi yeLampu ePole Light Waterpro ...
Ukukhanya kwangaphandle kwegadi ekhokele i-IP66 ye-Landscape Lights
I-35W yangaphandle yelanga ekhokelwe kukukhanya kwegadi ekhokelwe ngama-60W
Uyilo lwangoku lwe-aluminium yangaphandle yokuhamba kwendlela yokukhanyisa ngaphandle izibane zendlela yokuhombisa ukukhanya kwendlela ekhokele ukukhanya kwebollard
Umzimba wesibane wenziwe ngealuminium alloy ityhubhu kunye nezinto eziphezulu zokufa ezikhupha izinto zealuminium, kwaye umphezulu uphikisana nokuguga ngombane. Isigqubuthelo sokuhambisa ukukhanya sisebenzisa izinto zangaphandle zePC, anti-ukuguga kunye ne-anti-ultraviolet. Inqanaba lokhuselo linokufikelela kwi-IP65, ephezulu kunezibane zemveli. Umthombo wokukhanya uthe saa kwindawo engqongileyo, ukuhonjiswa kunye nokusebenza okunamandla kwengca, hayi kuphela ukufezekisa isiphumo esihle kodwa nokukhokela indlela. Ukufakelwa kunye disassembly eziluncedo, ekhuselekileyo kunye nokusingqongileyo.
Ukukhanya kweBollard ye-Landscape Garden Yard Square Outdoor Lighting kukhokelele ukukhanyisa ingca
Ukukhanya kwangaphandle kwe-IP65 okungamanzi okungama-25W kukhokelele ekukhanyeni kokukhanya kwegadi
Umzimba wesibane wenziwe nge-6063 aluminium alloy tube kunye ne-high-strength die-casting aluminium material, kwaye umphezulu uphikisana nokuguga ngombane. Isigqubuthelo sokuhambisa ukukhanya sisebenzisa izinto zangaphandle zePC, anti-ukuguga kunye ne-anti-ultraviolet. Inqanaba lokhuselo linokufikelela kwi-IP65, ephezulu kunezibane zemveli. Umthombo wokukhanya uthe saa kwindawo engqongileyo, ukuhonjiswa kunye nokusebenza okunamandla kwengca, hayi kuphela ukufezekisa isiphumo esihle kodwa nokukhokela indlela. Ukufakelwa kunye disassembly eziluncedo, ekhuselekileyo kunye nokusingqongileyo.